कीर्तिपुरमा सहचालक बिनाको माइक्रो बस, यात्रुलाई दशैँको बम्पर उपहार ! ( भिडीयो) « हाम्रो ईकोनोमी
कीर्तिपुरमा सहचालक बिनाको माइक्रो बस, यात्रुलाई दशैँको बम्पर उपहार ! ( भिडीयो)
कीर्तिपुर लेखिएको माइक्रोबस शहिदगेटमा रोकियो । दुई चारजना यात्रु मात्रै छन्, धेरै सिट खाली छ । अरुबेला सिट पाउन बसपार्क नै पुग्नुपर्थ्यो, बीचबाट चढ्दा उभिने ठाउँ पाउन पनि मुश्किल पर्थ्यो । तर अचम्म ! यो माइक्रोबस झण्डै रित्तै छ । ‘ए त्रिपुरेश्वर, कालिमाटी, बल्खु, कीर्तिपुर…’ भनेर कराउने सहचालक पनि छैन ।
कतिपटक त अरुसित पैसा मागेर तेल हालेको छु मैले । त्यसैले बाध्य भएर सहचालक नराखेको । सहचालक नभएपछि मलाई पनि आनन्द भएको छ । यात्रुलाई पनि आनन्द भएको छ । बढी भाडा लिएको गुनासो पनि आउँदैन । कारबाहीमा पनि परिंदैन । जहाँ पायो त्यहीँ रोक्न पनि पर्दैन । बसमा घुईंचो पनि हुँदैन । म कुवेत र दुबइमा पनि गाडी चलाएर आएको हो । उता पनि बसमा खलासी हुँदैन । त्यसैले बसमा खलासी नभएको धेरै राम्रो ।…’